Qaar ka mid ah Dowladaha Islaamka oo cambaareeyay weeraradii shalay ka dhacay Moqdisho | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Qaar ka mid ah Dowladaha Islaamka oo cambaareeyay weeraradii shalay ka dhacay...
Qaar ka mid ah Dowladaha Islaamka oo cambaareeyay weeraradii shalay ka dhacay Moqdisho
Boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa si kulul u cambaaraysay qaraxyadii isxigxigay oo shalay ka dhacay Caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho kuwaasoo galaaftay nolosha dad maato ah aan waxba geysanin.
Masu’ul ka tirsan wasaaradda Arrimaha dibadda ee Sacuudiga ayaa wakaaladda wararaka sacuudiga u shaagay inay Xukuumadiisu cambaaraynayso falalka noocan ah ee argagixisinimada,wuxuuka cadeeyay inuu daliisu uga tacsiyadeynayo Xukuumadda Soomaaliya iyo ehelada marxuukumintii ku geeriyootay qararyadaasi naf la caariga ah.
Wuxuuna sheegay in Boqortooyada Sacuudiga ay ka soo horjeedo nooc kasta oo fal argagixiso ah,wuxuuna u rajeeyay dadkii ku dhaawacmay falalkaasi inuu eebe bogsiiyo kuwii ku dhintayna janadiisa ka waraabiyo.
Sidoo kale wasaaradda Arrimaha Dibadda dalka Baxreyn bayaan ay soo saartay ayay ku cambaaraysay qaraxyadaasi waxaayna sheegtay in ay la jirto Xukuumadda Soomaaliya kana saacidayso ka hortagga falalka cadawtinimo ee noocan ahi oo xasiloonida iyo nolasha shacabka Soomaaliya qalqal gelinaya.
Bayaankaa ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Dowladda baxreyn ayaa lagu sheegay in mowqifkeeda ku aadan argagixisada uu yahay mid cad kana shaqeynayso sidii dunida looga cirib tiri lahaa.
Previous articleHadallada kulkuluul oo ay isdhaafnayaan Erdogan iyo Natanyahu oo sii kordhaya
Next articleAqalka Sare oo ka shiray qaraxyadii Moqdisho